+5 amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Huelva | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 06/10/2021 09:00 | mpitarika, Huelva
ny tanàna tsara indrindra any Huelva Manolotra anao trano fotsy tsy manam-paharoa, tsangambato, morontsiraka mahafinaritra ary zava-mahatalanjona voajanahary toy ny Doñana National Park (avelanay ianao eto lahatsoratra momba ity toerana ity). Fa koa tolotra fampiantranoana izay hahitanao ny tenanao ao an-trano.
Ary koa, misy faritra iray hafa amin'ny faritany tsy dia fantatra loatra amin'ny fizahan-tany izay ahitana tanàna kely misy eo amoron'ny tandavan-tendrombohitra any Cumbres Mayores na Aracena. Hiresaka momba azy ireo ihany koa izahay, saingy, ambonin'izany rehetra izany, hampiseho fitsidihana ireo tanàna tsara tarehy indrindra eto Huelva izahay izay hahafahanao hahafantatra amin'ny fomba lalina ny zava-mahatalanjona amin'ity faritra Espana ity.
1 Avy any Ayamonte ka hatrany Cortegana
1.3 Ho any an-tendrombohitra
1.4 Niebla, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Huelva
1.6 Cortegana, hamita ny fitsidihanay an'i Huelva
Avy any Ayamonte ka hatrany Cortegana
Hanomboka ny fitsidihantsika ireo tanàna tsara indrindra any Huelva any amin'ny morontsiraka toa an'i Ayamonte izahay ary avy eo dia hifindra mankamin'ny faritany. Amin'izany fomba izany dia hasehonay anao ny zavatra maro azo omena ity tany mahafinaritra ity.
Filankevitry ny tanàna Ayamonte
Any am-bavan'ny Renirano Guadiana, eo am-pototry ny Ala i Isla Cristina ary eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Portugal, ity tanàna Huelva ity dia tsy maintsy atao. Ao amin'ny faritra monisipaly no ahitanao ny malaza Morontsiraka Isla Canela akaikin'i Punta del Moral.
Saingy, eo akaikin'ny faritra manana lanja ekolojika avo lenta, manana lova lehibe i Ayamonte. Manoro hevitra anao izahay momba ny mpivavaka ireo fiangonana ao Nuestra Señora de las Angustias sy San Francisco, samy tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy izay miavaka amin'ny valindrihana miorina amin'ny rindrina Mudejar.
Tokony ho hitanao ihany koa ny tempolin'i El Salvador, ao anatiny misy alitara any Churrigueresque sy latabatra hosodoko Flemish maromaro. Ny lova ara-pivavahana any Ayamonte dia vitan'ny fiangonan'ny Las Mercedes, ny Mercedario ary ny fivorian'ny Hermanas de la Cruz, ny trano fiangonana ao San Antonio, del Socorro ary Nuestra Señora del Carmen ary ilay tsangambato sarobidy an'ny Virgen de las Angustias.
Mikasika ny maritrano sivily, manana ny tranon'ny tanàna tsara tarehy ianao Trano Marchena, izay mamerina ny fomban'ny trano karana; ny mausolika romana an'i Punta del Moral; ny lapan'ny Marquis an'i Ayamonte na ny Casa Grande, nanomboka tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo.
Farany, manoro hevitra anao izahay hahita ny Baluarte de las Angustias, izay sisa tavela amin'ny rindrina sisa tavela; ilay tilikambo Isla Canela manirery ary ilay tetezana iraisam-pirenena Guadiana mahavariana, izay manasaraka an'i Ayamonte sy Castro Marim, any Portugal.
Kianja ao Palos de la Frontera
Izahay izao dia mitondra anao ity tanàna kely ity fa tsy hoe satria izy dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra ao Huelva, fa noho ny lanjany ara-tantara lehibe koa. Araka ny fantatrao tsara, avy tao amin'ny serananany no nialany Christopher Columbus tamin'ilay dia nahatonga azy hahita an'i Amerika.
Izany rehetra izany dia nahatonga an'i Palos hiseho amin'ny làlan'ny tantara ara-javakanto ao amin'ny Toerana Columbian. Ao amin'ny tanànan'i Huelva dia azonao atao ny mitsidika ny Monastera La Rabida, izay tsy vitan'ny hoe miavaka amin'ny fiangonany Gothic-Mudejar, fa koa manana tranombakoka natokana ho an'ny fahitana an'i Amerika. Toy izany koa, ao amin'ny seranan-tsambon'i Palos no misy ny Muelle de las Carabelas, miaraka amina voajanahary voajanaharin'ireo izay noraisin'i Columbus tamin'ny asany.
Mety tsy fantatrao fa ireo rahalahin'i Pinzón malaza, izay niaraka taminy, dia tompon-tany amin'ity tanàna ity. Noho io antony io, ao amin'ny tranon'ny zokiny indrindra amin'izy ireo, amin'ny fomba Renaissance, dia manana tranombakoka ihany koa ianao. I Martín io ary manana sarivongana ao an-tanàna ihany koa.
Fa ny zavatra azonao tsidihina ao Palos dia tsy mifarana eto. Tena mahaliana Fiangonan'ny St. GeorgeIzy io koa dia amin'ny fomba Gothic Mudejar ary misy fresco an'ny Renaissance ary sary sokitra tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay maneho an'i Santa Ana. Ho fanampin'izany, manana ny Fontanilla ianao, loharano kely iray izay nanome rano an'ireo karaety, sy ireo tavela tamin'ny arkeolojika tao amin'ny lapan'i Palos.
Ary farany, eo amin'ny manodidina ny monasiteran'ny La Rábida dia manana ny ianao Tsangambato ho an'ireo nahita, izay tratra amin'ny alàlan'ny làlana voaravaky ny ampingan'ny firenena Ibero-Amerikanina sy ny valan-javaboary José Celestino Mutis. Ary toy izany koa, zava-bita iray hafa izay nandao an'i Palos dia notadidina tao amin'ny Muelle de la Calzadilla: ny sidin'ny Plus Ultra, seranana iray izay, tamin'ny 1926, dia tonga tany Buenos Aires.
Ho any an-tendrombohitra
Almonte, iray amin'ireo tanàna tsara indrindra ao Huelva
Hankany amin'ny afovoan-tanànan'i Huelva izahay hijanona amin'ity tanàna tsara tarehy ity izay manana ny manintona rehetra. Hanombohana azy, ao amin'ny faritra monisipaly misy azy ireo ny Morontsiraka Matalascañas ary ampahany tsara amin'ny valan-javaboary Doñana. Fa ambonin'izany rehetra izany, satria ao koa no ahitana ny tanàna malaza ao El Rocío, izay misy ny hermitage mahafinaritra izay anaovan'ny mpivahiny an'arivony isan-taona fivahinianana masina. Avelanay eto ianao lahatsoratra momba ity tanàna kely ity.
Toy izany koa, manana tsangambato mahaliana hafa ianao ao amin'i Almonte. Anisan'izany, ny fiangonan'ny Lady's of the Assuming, miaraka amin'ny trano fiangonana ao Mudejar, ny hermitage Santo Cristo ary ny tranon'ny Hall Town, naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Ity farany dia voahodidin'ny arabe tery miaraka amin'ireo tranony fotsy fotsy mahazatra.
Niebla, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Huelva
Rindrina sy tranon'ny Niebla
Tonga amin'ny iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra eto Huelva izahay izao, nefa koa iray amin'ireo malaza tsy fantatra, na dia vatosoa tena izy aza. Niebla dia manana tantara an'arivony taona. Raha ny marina dia renivohitry ny iray tamin'ireo coras izay ny Kalifa any Córdoba ary taty aoriana dia lasa taifa mahaleo tena.
Be dia be kokoa, ao amin'ny faritra monisipaly misy azy ireo dolmens an'ny La Hueca sy de Soto, izay mitondra antsika hiverina amin'ny vanim-potoana vy. Azonao atao ihany koa ny mahita ao an-tanàna ny tetezana romana voatahiry tanteraka sy ny sisa tavela amin'ny katedraly kristiana tany am-boalohany avy tamin'ny vanim-potoana Visigoth.
Fa ny tena manintona an'i Niebla dia ilay ensemble manaitra izay noforonin'izy ireo ny mandany sy ny tranony hatramin'ny vanim-potoana Almoravid. Ary eo anilany, ny fiangonana Nuestra Señora de la Granada, izay moske taloha amin'ny fomban'ny Gothic Mudejar; ny lapan'ny Guzmanes sy ny Hopitalin'ny Our Lady of the Angels, tranon'ny kolontsaina ankehitriny.
Fijerena an'i Aracena
Efa eo afovoan'ny tandavan-tendrombohitra tsy fantatra anarana no ahitantsika ny tanàna tsara tarehy Aracena, miavaka amin'ny tranony misy rindrina fotsy, tontolo voajanahary manana tombony ary tsangambato maro. Mikasika ny tontolony, feno izy io Valan-javaboary Sierra de Aracena sy Picos de Aroche, izay, ho fanampin'izay, azonao jerena ireo toerana arkeolojin'i Cueva de la Mora, Cerro del Tambor ary del Castañuelo.
Saingy ny fahagagana lehibe an'i Aracena dia eo ambanin'ny faritra tanànany. Miresaka momba ny Grotto an'ny zava-mahatalanjona, izay ny fidirana dia amin'ny arabe Pozo de la Nieve. Izy io dia kompana ambanin'ny tany noforonin'ny famaohin'ny rano tao anaty vatosokay an-kavoana tao amin'ny del delillo. Manana halava mihoatra ny roa arivo metatra ny halavany, na dia zato sy dimy ambin'ny folo eo ho eo monja aza no azonao atao. Na izany na tsy izany dia hahita fampisehoana tsy manam-paharoa stalactites, stalagmites, aragonites na coraloids ianao miaraka amin'ny farihy.
Rehefa avy nankafy an'io zava-mahatalanjona voajanahary io ianao, dia manoro hevitra anao koa izahay hitsidika ireo tsangambaton'ny Aracena. Efa niresaka momba ny manan-danja indrindra aminao izahay amin'ny fandalovana. Miresaka izahay lapan'ny, trano mimanda arabo tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
Manaraka izany ny Fiangonan'ny Tompon'ny fanaintainantsika lehibe, Fomban'ny Mudejar, na dia misy aza ny singa sasany ao aminy, toy ny vavahady sy ny amboarampeo dia efa an'ny Gothic tara. Ireo fisehoana arsitektur mitovy amin'izany dia manolotra ny efitranon'i Santa Catalina Mártir sy ireo fiangonan'i San Pedro na San Roque. Fa vao mainka tsara tarehy kokoa ny fiangonana Santa María de la Asunción, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX araka ny canons amin'ny fomba Renaissance.
Tsy mifarana eto ny lovan'i Aracena. Raha ny momba ny maritrano sivily dia mamporisika anao izahay hahita ny tranon'ny Lapan'ny tanàna, ny chalet Aracenilla, ny trano fiompiana ao San Miguel ary indrindra ny mahatalanjona Casino Arias Montano, fananganana fomba maoderina maoderina.
Cortegana, hamita ny fitsidihanay an'i Huelva
Castle an'i Cortegana
Manakaiky an'i Aracena dia tanàna iray hafa izay tafiditra ao anatin'ny tanàna tsara indrindra ao Huelva ihany koa. Cortegana ity ary manambatra lova goavambe mahafinaritra miaraka amin'ny manodidina mahatalanjona.
Mikasika ny voalohany, ny marika lehibe an'io dia ny lapan'ny. Izy io dia natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary misy trano mimanda, barbican ary hermitage, an'ny Nuestra Señora de la Piedad. Amin'izao fotoana izao, ny sasany andro medieval tena mahaliana.
Ny trano fivavahana lehibe indrindra eto Cortegana dia ny fiangonan'ny Mpamonjy Masina, natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny endrika Mudejar Gothic, na dia nisy aza ny fanitarana taty aoriana nanome azy endrika Renaissance. Ho fanampin'izay, ao anatiny dia afaka mahita mahavariana ianao fanangonana fitaovana vita amin'ny volafotsy meksikana tamin'ny taonjato faha-XNUMX, polipitra iray avy amin'ny vanim-potoana mitovy sy kintana vy mahavariana, ary koa sary ara-pivavahana manankarena.
Manoro hevitra anao izahay hahita ny fiangonan'i san sebastian, koa Gothic Mudejar; ny hermitage of Calvario sy ny tranon'ny Grand Casino Society ary ny teatra Capitol-Sierra.
Ho famaranana, nanao fitsidihana sasany taminay izahay ny tanàna tsara indrindra any Huelva. Na izany aza, any amin'ny faritany toa an'i Huelva dia misy tanàna tsara tarehy maro hafa. Izany no izy, ohatra, an'ny Jabugo, fandrian-jaza amin'ny ham mitovy anarana aminy; From Almonaster la Real, miaraka amin'ny mosque misy azy amin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny tetezana mahavariana amin'ireo Loharano telo, na Sanlúcar de Guadiana, miaraka amin'ny lapan'i San Marcos manankery. Tsy ampy ve ny antony hitsidihana an'i Huelva?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Ny tanàna tsara indrindra any Huelva